स्काउटमोब: वास्तविक-समय स्थानीय डीलहरू | Martech Zone
बुधबार, मार्च 28, 2012 मंगलवार, मार्च 27, 2012 Douglas Karr
दैनिक सौदा उद्योगमा केहि मिश्रित प्रतिक्रियाहरू छन् जहाँ अत्यधिक छूटको दुखाईले सेवाहरूको उपयोग गर्ने केही व्यवसायलाई मेटायो। स्काउटमोब चीजहरू अलि बेग्लै तरीकाले देखापर्दछ, व्यावसायको लागि वास्तविक-समय, भुक्तानको रूपमा तपाईको समाधान। स्काउट मोब एक अनुप्रयोग हो जुन एन्ड्रोइड, आईफोन र ब्ल्याकबेरीमा उपभोक्ताहरूलाई वितरित गरिएको छ जहाँ व्यक्तिहरू लगइन गर्न र सम्झौता जाँच गर्न सक्दछन्, तर मात्र जब तिनीहरू तयार छन् प्रयोग गर्नुहोस्।
देखि स्काउटमोब FAQ पृष्ठ:
कसरी स्काउटमोब ती "समूह खरीद" साइटहरू भन्दा फरक छ? Scoutmob केहि तरिकामा उस्तै हो, तर अरूमा धेरै भिन्न। यी साइटहरू जस्तै, हामी दैनिक डीलको साथ ईमेल प्रदान गर्दछौं जुन २ hours घण्टाको लागि उपलब्ध हुन्छ। तर त्यहाँ "समूह खरीद" साइटहरूको विपरित, हामीलाई ती ग्राहकहरूबाट अग्रिम भुक्तानीको आवश्यकता पर्दैन, त्यसैले तपाईंले आफ्नो कडा कमाएको राजस्वको अधिक प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसले बाहिर र को बारे मा स्थानीयहरु लाई उनीहरुका विकल्प अन्वेषण गर्न अझ बढी प्रोत्साहन दिन्छ। त्यस भन्दा बढि, हाम्रो मोबाइल प्लेटफर्मले यी तिर्ने ग्राहकहरुलाई दोहोर्याउने व्यवसायका लागि फिर्ता आउन प्रोत्साहित गर्दछ। हामी पनि केवल स्थानीय व्यापार मा पूरा, त्यसैले तपाईंको ब्रान्ड केहि शहर मा प्रस्ताव छ केहि मध्येको एक हो।
सामान्य सम्झौता के हो? स्काउट मोब "% अफ" सौदाहरूको जादू यो हो कि त्यसले उच्च जनसांख्यिकीय ग्राहकहरूलाई उनीहरूको बानीहरू छोड्दछ र तपाईंको व्यवसायलाई एक चोटि दिन्छ, त्यसकारण हामीले सोध्ने सबै कुरा यो हो कि तपाईंले हाम्रा प्रशंसकहरूलाई एउटा राम्रो सम्झौता दिनुहोस्। त्यसोभए हामी तपाईंको छूट क्याप गरेर र तपाईंलाई मात्र चार्ज गरेर तपाईंको सुरक्षा गर्दछौं जब हाम्रा ग्राहकहरूले निर्णय गर्दछन् कि उनीहरूले तपाईंको व्यापारलाई प्रयास गर्न चाहन्छन्।
म कहिले चित्रित हुनेछु? हाम्रो स्थानीय टोली तपाई संग काम गर्नेछ र तपाइँको व्यवसाय को सुविधा को लागी सबै भन्दा राम्रो दिन को योजना बनाउँछ। त्यसो भए, हामी तपाईंसँग एक अद्वितीय स्काउटमोब राइट-अप सिर्जना गर्न काम गर्नेछौं, यो सुनिश्चित गर्दै हाम्रा ग्राहकहरू (र उनीहरूका सबै साथीहरू) तपाईंको सम्झौताको बारेमा सुन्नेछन्।
सम्झौताहरू कति लामो हुन्छ? तपाईंको व्यवसाय एक दिनको लागि हाम्रो ईमेल र वेबसाइटको सुविधा हुनेछ। त्यसो भए, तपाईंको सम्झौता तीन महिनामा हुनेछ। यस तरिकाले, सीमित प्रस्तावमा जरुरीता छ, तर त्यहाँ मोबाइल ग्राहकहरूको लागि उनीहरूको मार्गमा जानको लागि पर्याप्त समय पनि छ (र नियमितहरू बन्नुहोस्)।
यो कति खर्च गर्छ? अहिले सम्म, स्थानीय तवरले विज्ञापन गर्ने एक मात्र तरीका भनेको पैसाको एक गुच्छा भुक्तानी गर्नु थियो, आशा छ कि सन्देश समातिएको छ, र त्यसपछि तपाईंको खुट्टा ट्राफिकको लागि तपाईंको औंलाहरू पार गर्नुहोस्। Scoutmob को साथ, हामी केवल तपाईंको ग्राहकहरू द्वारा भुक्तानी गरेपछि मात्र भुक्तानीको लागि सोध्छौं। मूल्य निर्धारण को बारे मा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ? मूल्य निर्धारण बारे स्काउटमोब टोलीसँग कुरा गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मलाई कसरी भुक्तानी गरिन्छ? तपाईंलाई भुक्तानी गर्ने तरिका तपाईंलाई भुक्तानी गरिनेछ: ती संतुष्ट ग्राहकहरूले तपाईंको प्रस्तावको मजा लिन आउँदैछन्। त्यस पछि, तपाईं मात्र हामीलाई सम्झौता दाबी गर्ने Scoutmob प्रशंसकहरूको संख्या को लागी भुक्तान गर्नुहोस्।
टैग: स्थानीय सम्झौता
चाचाले सामाजिक सम्बद्ध कार्यक्रम शुरू गर्‍यो